ह्वाइट–हाउसको बाछिटा सिंहदरबारतिर
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिह्वाइट–हाउसको बाछिटा सिंहदरबारतिर
बाँच्नु मात्रै पर्छ, जीवनमा अनेक कुरा देखिन्छन् । अनेक अनुभव सँगालिन्छन् । कन्टिर–बाबूले पनि जीवनमा के–के देख्नुपर्ने हो, के–के !
अमेरिकाको पछिल्लो घटना नै हेरौँ न ।
अरे यार, दुनियाँलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउने अमेरिकी सरकार र अमेरिकी जनता अब दुनियाँलाई मुख देखाउने लायक रहे कि रहेनन् ? कतिपय नेपालीले ठान्ने गरेको ‘सपनाको देश’मा बस्ने नागरिकको यही हो त सार्वजनिक व्यवहार ?
कन्टिर–बाबूले नेपालसहित दक्षिण एसिया सेरोफेरोका देशमा मात्र संसदमा तोडफोड हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । तर कन्टिर–बाबूको यो धारणा गलत ठहरिएको छ ।
ट्रम्पका कार्यकर्ता पनि हाम्रा नेपाली राजनीतिक कार्यकर्ताजस्तै पो देखिए । राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम प्रभावित गर्न ट्रम्पेहरूले संसदमा तोडफोड मच्चाएर जगहँसाइ गरेका छन् ।
वाइडेनलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्दै ट्रम्प किन यति तल्लो दर्जामा ओर्लेका होलान् ! कहिले अदालतलाई चुनौती दिएको छ, कहिले कर्मचारीलाई फोन गरेर प्रभावित गर्न खोजेको छ, कहिले संसद् भवनमा लीला देखा’को छ । कहिले के कहिले के !
छ्या … के भा’होला यो ? लोकतन्त्रमाथिको हाकाहाकी उपहास गरिएको यो घटना हेरेर हाम्रा नेपाली ट्रम्पेहरू निकै खुसी छन् । ओइलिन लागेका मुलाङहरूले एकाएक बौरिने बहाना पाए ।
कन्टिर–बाबूका अनुसार– नेपालको लोकतन्त्र त यसै पनि कोमामा पुगेकै थियो, नेपाली फन्टुसहरू अमेरिकाको यो घटनापछि झन् हौसिएर लोकतन्त्रलाई पूरै निस्तेज गर्न हौसिने सम्भावना पो बढ्यो त !
ह्वाइट–हाउस वरपर पानी पर्दा सिंहदरबारमा छाता ओढ्ने प्रवृत्ति रहेसम्म कन्टिर–बाबूले मात्र होइन, जसले पनि शङ्का गर्छ ।
अमेरिका तोडफोड लोकतन्त्र